डेलाईट सेभिङ: यसरी मिलाउनुस् घडीमा समय - Nepali Page
२० आश्विन २०७५, शनिबार १०:५० 509 पटक-पढिएको
फोन, कम्प्युटर तथा अरू ‘ईलेक्ट्रोनिक्स’ उपकरणहरूमा आँफै समय मिल्ने भएपनि भित्तामा घडी राख्नुभएको छ भने पक्कै पनि घडीको समय मिलाईसक्नु भयो होला। भित्तेघडी मिलाइसक्नुभयो भने यदी तपाईंको कारको घडी ‘म्यानुअल’ हो भने त्यसको समय पनि मिलाइहाल्नुस्। ’cause भोली आइतबार विहान गते आईतबार विहानबाट अष्ट्रेलियाका राज्यहरू न्यूसाउथवेल्स, भिक्टोरिया, तासमानिया, साउथ अष्ट्रेलिया र अष्ट्रेलियन क्यापिटल टेरिटरीमा विहानबाट ‘डेलाइट सेभिङ टाइम’ सुरू हुँदैछ। आईतबार विहान २ बजे घडिको घण्टा सुईलाई दुईमा पुग्नासाथ धकेलेर ३ मा लैजानु पर्छ। यसको मतलब हो आज विहान सम्म दुई बज्ने समयमा भोली तीन बजिसक्छ। मतलब आईतबार एक घण्ट कम सुतिन्छ, तर बिदाको दिन भएकाले धेरै नै प्रभाव पर्दैन।
कसरी मिलाउने घडी, पछी जाँदैछौं कि अघि?
धेरै जसो ‘डिजिटल’ उपकरण चलाउने र ती उपकरणले आफै समय मिलाउने भएकाले धेरैलाई एक घण्टा जोड्ने हो वा घटाउने हो भन्नेमा खास समस्या पर्दैन। तर गाडीको वा भित्ताको घडीको समय आफैले मिलाउन बिर्सँदा भने एक दिन देखी एक साता सम्म समय मिलानको ‘कन्फ्युजन’ रहीरहन सक्छ। अंग्रेजीमा रहेको भनाई एउटा भनाई “You ‘Spring’ forward, then you ‘Fall’ back” ले यो घडी मिलाउने कुरालाई स्पष्ट पार्दछ। यसको मतलब हो ‘सेप्टेम्बर’मा ‘ डेलाईट सेभिङ सुरू हुँदा घडीलाई एक घण्टा छिटो बनाईन्छ भने ‘अप्रिल’मा डेलाईट सेभिङ अन्त्य हुँदा फेरी विहानको तीन बजेको घडीको सुईलाई घुमाएर दुई बजेको बनाईन्छ।
अष्ट्रेलिया लगायत विश्वका कतिपय मुलुकले हरेक वर्ष डेलाइट सेभिङ टाईम भनेर केही मिनेट वा घण्टा घडीको समयलाई एडजस्ट गर्छन्। ’cause ती देश र भूभागमा घाम छिटो वा ढिलो उदाउँछ। अष्ट्रेलियामा आईतबार घडीको समय मिलाएर एक घण्टा छिटो लगिँदैछ भनेपछी अब घाम छिटो उदाउँछ । खासमा यो घामसँगै समय मिलाउने काम सुरू भएको धेरै लामो समय भइसकेको छ। यससँग देशको अर्थतन्त्र, मानिसको काम गर्ने क्षमता साथै तपाईं हाम्रो स्वास्थ्य समेत जोडिएको छ। आखिर किन सुरू भयो त यो परम्परा हेर्नुस यो भिडियोमा
अघिल्लो यताबाट खोज्नुस् डार्बिनमा काम
पछिल्लो कसरी बन्ने आकर्षक ?
२३ चैत्र २०७५, शनिबार ११:२३
१९ चैत्र २०७५, मंगलवार ०८:५६